मिनिरल वाटर अथवा वोत्तल बन्द पानीले हुनसक्छ क्यान्सरको खतरा - ज्ञानविज्ञान
शरीरलाई पानी नभई नहुने चिज हो । शरीरका लागि स्वच्छ पानी आवश्यक छ । तर, अहिले हामीले पिउने पानी दूषित छ, हानिकारक छ, विषाक्ता छ । त्यही कारण फिल्टर गरेर, उमालेर वा विभिन्न विधिबाट शुद्धिकरण गरेर पानी पिउने गरिन्छ ।
काठमाडौं लगायत शहरी क्षेत्रको हकमा त रोगको स्रोत नै भएको छ, पानी । पानीको माध्यामबाट विभिन्न महामारी फैलने गरेको छ । ट्यांकीमा जम्मा गरेर घर घरको धारामा आउने पानी होस् वा ट्यांकरले आपूर्ति गर्ने पानी नै, स्वच्छ हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । यस्तो पानीले हाम्रो स्वास्थ्यलाई नाजुक बनाउँदैछ ।
यस्तो अवस्थामा हामीले विश्वास गरेको भनेको प्रशोधित पिउने पानी हो, जो बजारमा सहजै पाइन्छ । बोत्तलमा पाइने ति पानी हामी निस्फिक्री घटघट पिउँछौं । त्यसलाई अतिरिक्त शुद्धिकरण गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन, न त उमाल्नुपर्छ भन्ने नै ।
खतरनाक बोत्तलको पानी |
हामीले बजारमा ‘मिनिरल वाटर’ भनेर पिउने वोत्तल बन्द पानी हानिकारक भएको हालैको एक शोधले खुलासा गरेको छ । शोधकर्ताले चीन, ब्राजिल, इन्डोनेसिया, अमेरिका लगायत ९ देशमा बिक्री गरिने ११ अलग-अलग ब्रान्डको करिब २ सय ५९ प्याकेट बोत्तल जाँच गरेको थियो ।
उक्त जाँचमा के पाइयो भने, विश्वभर बिक्री हुने यस्ता प्याकेज्ड मिनिरल वाटरमा ९३ प्रतिशतसम्म प्लाष्टिकको स(सानो कण पाइयो । छिमेकी भारतमा समेत यस्तो पानी प्रशस्तै पाइएको छ । दिल्ली, चेन्नाई, मुम्बई लगायत १९ वटा स्थानको पानीको नामुनामा हानिकारक प्लाष्टिकको टुक्रा पाइयो ।
बोत्तलबन्द पानीले के हानी गर्छ
प्लाष्टिकको बोत्तलको पानी क्यान्सरको कारण बन्नसक्ने चिकित्सकहरुले औल्याएका छ । प्लाष्टिकको बोत्तल जब घाम वा तापमानको कारण तातो हुन्छ, प्लाष्टिकमा रहेको हानिकारक केमिकल डाइअक्सिनको पानीमा घुल्छ । यो पानीको माध्यामबाट हाम्रो शरीरमा पुग्छ । डाइअक्सिनले हाम्रो शरीरको कोसिकालाई पुरा नष्ट गर्छ । यसले महिलामा ब्रेस्ट क्यान्सरको खतरा बढाउँछ ।
२. मस्तिष्कलाई असर
प्लाष्टिकको बोत्तलमा पाइउने पानीमा जुन केमिकल हुन्छ, त्यसले मस्तिष्कको कार्यक्षमता पनि कमजोर बनाउँछ । यसले स्मरण क्षमतामा ह्रास आउने भय छ ।
३. कब्जियतको कारण
प्लाष्टिकमा राखिएको पानी सेवन गर्दा यसमा रहेन बाइसफेनोल एको कारण पेटमा एकदमै हानी पुग्ने बताइएको छ । बीपीए नामक रसायन जब पेटमा पुग्छ, तब यसले पाचन प्रक्रियालाई प्रभावित गर्न सक्छ । यसले ग्याष्ट्रिकको गराउँछ ।
४. गर्भपतनको खतरा
पानीमा घुलेको स–सना प्लाष्टिकको कणले महिलामा गर्भपतनको खतरा बढाउँछ । गर्भवती महिलालाई यसको निकै असर देखिएको छ ।
५. जन्म दोष
बोत्तलमा राखिएको पानीमा हुने रसायनले भ्रुणको बच्चालाई समेत असर गर्ने बताइएको छ । यस्ता पानीको सेवनले भू्रणको बच्चा असामान्य रुपमा पैदा हुने रिसर्चमा उल्लेख छ ।
Don't Miss it शिवको प्रसाद भाङ कति फाइदाजनक ?
Up Next आँखा पाक्ने रोग के हो, किन हुन्छ, लक्षणहरु र उपचार
यस्तो अवस्थामा न खानुस केरा, ज्यान जाने सम्भावना – जानी राखौँ